China KN95 Inodzivirira Mask Mugadziri uye Mutengesi | Zvirinani
Chigadzirwa Chigadzirwa: KN95 Inodzivirira Mask (Kwete yechirongwa chekurapa)
Model Nhamba: BTK-001
Zvinhu: 40% Isina kurukwa + 30% yakanyungudika-yakapeputswa + 30% firita coton
Kunyanya: 15.5cm х 10.5cm (5Ply)
Qty: 20 pcs / bhokisi
Chaicho Kushandisa: anti-guruva, Sefa mabhakitiriya, anti-kunofambira mberi
Iyo inodzivirira firita membrane inogona kunyatso kusefa zvidiki zvidiki kagumi pane PM2.5, ine yakanaka yekusefa maitiro uye yakaderera kufema kuramba. Iyo maski inoshandisa nzeve-chirauro musoro, izvo zvisiri nyore kudonha; mhino yemhino yakaiswa mukati mayo, uye kuiswa chisimbiso kwakasimba.
Iyo KN95 mask inogona kusefa magasi ane chepfu; inogona kudziya; inogona kutora mvura; inotatamuka; hazvizove zvakashata; zvinonzwa zvakanaka kwazvo uye zvakapfava; uchienzaniswa nemamwe mamask, iwo maratidziro akareruka; yakasununguka uye inogona kudzorerwa mushure mekutambanudza
01. Mhepo isina kufema isina kufema
bvisa guruva, hwema uye zvinokuvadza zvikamu
02. Mhepo inopisa
simbisa kusefa kwezvakanaka zvikamu
03. Nyungudutsa jira rakapeputswa
kusefa kusefa kunodarika 95%
04. Yanyauka jira rakapeperetswa
05. Ganda-rinoshamwaridzika risina kurukwa jira
hunyoro-humbowo uye hunofema, kusefa guruva
1. Geza maoko usati wapfeka chifukidzo.
2. Bata tambo nzeve nemaoko maviri, isa rima divi kunze (bhuruu), uye iro rakareruka mukati (chena suede).
3. Isa rwonzi rwesimbi parutivi rwechifukidzo (chidimbu chidiki chakaomarara) pamhino dzako, tsinya waya yesimbi zvinoenderana nemamiriro emhino dzako, uye wozokweva muviri wemask zvachose kuti mask ivhare zvakakwana mhino nemuromo.
4. Masiki anoraswa anowanzotsiviwa mumaawa masere uye haakwanise kushandiswazve.
1. Makore maviri garandi, ndapota shandisa mukati memakore maviri.
2. Inoraswa chete uye yakaparadzwa mushure mekushandisa.
3. Usasanganise mukati nekunze.
4. Usashandise kana pasuru yakanganisika.
5. Ndokumbirawo ushandise nekuchenjerera kana uri weergoria kune isina kurukwa.
Pashure: 75% Doro Instant Antibacterial Spray Ruoko Sanitizer
Zvadaro: 75% Doro Instant Antibacterial Gel Ruoko Sanitizer